Izindaba - Amathuba nezinselele zihlala ndawonye, ​​futhi ukupakisha okuhlakaniphile kwezokwelapha kuba yinto ejwayelekile yekusasa
Amathuba nezinselelo zihlala ndawonye, ​​futhi ukupakisha okuhlakaniphile kwezokwelapha kuba yinto ejwayelekile yekusasa
Eminyakeni yamuva nje, ngokuthuthuka okusheshayo komkhakha wezemithi wasekhaya, izinkampani ezithaka imithi sezinake kakhulu ukupakisha, kanye nenqubekela phambili eqhubekayo yokupakisha nokuphrinta ubuchwepheshe, inani lokukhishwa kwamaphakethe wezwe lami likhombise ukuthambekela konyaka wokukhula unyaka. Ngokwe- "2019-2025 China Pharmaceutical Packaging Market Status Survey and Development Prospect Report" ekhishwe yiChina Industry Research Network, imboni yezemithi yokwenziwa kwemithi ibalelwa ku-10% wenani eliphelele elikhishwa emaphaketheni asekhaya, kanti imboni inekusasa eliqhakazile.
Imakethe ishintsha ngokushesha, futhi amathuba nezinselelo zihlala ndawonye. Ngakolunye uhlangothi, ngokuthuthuka kancane kancane kwezinga lokusetshenziswa kwabantu kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo kwe-aesthetics, ukufakwa kwezokwelapha kuveza izici zobuntu obuhlukahlukene nokusebenza okuthuthukisiwe kwemvelo. Ngasikhathi sinye, ngokuqaliswa kwenguqulo entsha yoMthetho Wezokuphathwa Kwezidakamizwa, imboni ngokuvamile ikholelwa ukuthi ukukhululeka kancane kancane kokuthengiswa online kwemithi kadokotela kuyinto ejwayelekile, okusho nokuthi isidingo sokugcinwa kwemithi kadokotela, ukuthuthwa kanye ukupakisha kuyanda ngokwanda kokungena kwe-Intanethi. Ngokuvamile, ubukhulu bezimakethe zomkhakha wezokupakisha okwenziwa ngemithi kulindeleke ukuthi buqhubeke bukhule ngokuzayo, futhi isakhiwo sokuphakelwa kanye nesidingo kulindeleke ukuthi siqhubeke nokuthuthuka. Ngaphansi komncintiswano wezimakethe oqhubeka unolaka, izinkampani zokupakisha ezithaka imishanguzo yasekhaya zidinga izindlela ezintsha zenguquko nentuthuko.
Ngakolunye uhlangothi, ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe obuhlakaniphile, ukuthuthukiswa okuhlakaniphile nokuhlanganiswa okuphakathi kuzoba umkhuba omkhulu wokuthuthukiswa komkhakha wokupakisha eminyakeni embalwa ezayo. Kulo mongo, ngesikhathi sokuthuthukiswa komkhakha wezokwelapha wanamuhla, ukwenziwa ngcono kwamadivayisi wezokwelapha bekuhlala kuyisihloko socwaningo esitholile ukunakwa. Ngokwesisekelo sendlela yokwenza ukupakisha kwezokwelapha kuphephe futhi kube lula kakhudlwana, ukwengezwa komqondo wokuvikelwa kwemvelo kwenze ukuthuthuka kwamaphakeji ezokwelapha kube nenjongo. Ngasikhathi sinye, ukuhlakanipha kokupakisha kwezokwelapha nakho kufakwe ku-ajenda.
Ukupakisha kwezokwelapha okuhlakaniphile sekuyindlela yokuthuthukiswa komkhakha. Okubonwayo ukuthi maqondana nokupakishwa komkhiqizo wezokwelapha uqobo, ukuphepha okuphezulu kanye nezimpawu zokucacisa okuphezulu kukwenza kube yizinga eliqinile okungekho okunye ukupakishwa komkhiqizo okungeke kufane. Ngaphansi kobuholi bokuthuthukiswa kobuchwepheshe kanye nezindlela zokuklama, ubuntu besimanjemanje, lula, nesisindo esincane kube ukubonakaliswa okubalulekile komkhuba ohlakaniphile wokupakisha kwezokwelapha.
Ngaphezu kokuklanywa kwesakhiwo sokupakisha kanye nezinto zokwakha, ukupakishwa kwezokwelashwa okusekelwe kulwazi kuye kwakha kancane kancane inkambiso yentuthuko esheshayo, futhi ukusetshenziswa kokupakisha okusekelwe kulwazi okubandakanya amakhodi we-QR, ama-barcode, namalebula kagesi kuye kwangena kancane kancane emaphaketheni ezokwelapha umkhakha. Lokhu futhi kusekelwe kuzindlela zokuthola ulwazi ezihambisanayo ezinikezwa amadivayisi we-smart smart asetshenziswa kakhulu.
Njengamanje, izwe lami lisaqala ukucwaninga nokukhiqizwa kwamaphakethe ezokwelapha ahlakaniphile. Kuyadingeka ukusebenza kanzima ezintweni eziningi njengokuqamba izinto ezintsha, ucwaningo lwezinto zokukhiqiza kanye nentuthuko, ucwaningo lwezinto ezibonakalayo kanye nemiphumela yokuthuthuka, ukuphathwa kwezindleko zokupakisha, kanye nentuthuko yezimakethe ukukhuthaza ukuthuthukiswa kokupakisha okuhlakaniphile kwezwe lami.
Isikhathi Iposi: Sep-25-2019